UziLandela njani ngokuGuqukayo kunye nokuThengisa kwiNtengiso ye-imeyile | Martech Zone
Ukuthengisa nge-imeyile kubaluleke kakhulu kuguquko lokusebenzisa njengoko bekusoloko kunjalo. Nangona kunjalo, abathengisi abaninzi basasilela ukulandelela ukusebenza kwabo ngendlela enentsingiselo.
Indawo yokuthengisa iye yavela ngesantya esikhawulezayo kwi-21st Century, kodwa ngalo lonke ixesha lokunyuka kweendaba zosasazo, i-SEO, kunye nokuthengisa umxholo, imikhankaso ye-imeyile ihlala ihleli iphezulu kwikhonkco lokutya. Inyaniso, 73% yabathengisi jonga ukuthengisa nge-imeyile njengeyona ndlela isebenzayo yokuguqula i-Intanethi.
Umthombo wesithombe: IiAeroLeads
Ngelixa ukusebenzisa iiwebhsayithi zokunxibelelana kunokuba yindlela eyomeleleyo yokwazisa ngakumbi ngohlobo lwebrand, iindlela zokuthengisa ezisekwe kwi-imeyile zinokunika amashishini ithuba lokulandela kunye nokuvelisa ukuthembeka phakathi kwezikhokelo ezinemvakalelo ezizezakho. Imikhankaso ye-imeyile ingaba yinto yokubonisa inkathalo, ubuntu obuninzi phakathi kwamashishini anokukhokelela kwimigangatho ephezulu yokuguqulwa.
yakutshanje amathontsi kwindawo yokufikelela kwindalo amajelo eendaba ezentlalo aqhubele phambili ekomelezeni ixabiso lemikhankaso ye-imeyile yabathengisi. Ngokubonakala ngokuthe ngqo phambi kwabamkeli ngaphakathi kwiibhokisi zabo zebhokisi, ukuthengisa nge-imeyile kungakha ubudlelwane obunamandla phakathi kweempawu kunye nabathengi bazo. Olu luvo lokuxatyiswa zizibonelelo zeshishini zikhokelela ekufumaneni inkuthazo abayifunayo yokuthenga kwindawo.
Ngelixa kungekho kuthandabuza ukusebenza kwentengiso ye-imeyile, kubalulekile ukuba amashishini asebenzise amandla e-imeyile ngendlela efikelela kubona bathengi baninzi. Ngale nto engqondweni, kufanelekile ukujonga kwezinye zeendlela ezibaluleke kakhulu apho abathengisi banokulandela umkhondo ukuguqulwa kwe-imeyile kwaye baguqule iindlela zabo kwintengiso.
Ubugcisa bokuKhangela ukuGuqulwa kwe-imeyile
Imikhankaso ye-imeyile ixabiseke kakhulu ukuba abathengisi abalandeleli uguquko abalwenzayo. Umahluko kwinani lababhalisi abafunwayo kuluhlu lwakho lokuposa kuya kuthetha okuncinci kakhulu ukuba awunakho ukufumana nabani na ukuba alandele umdla wabo ngokuthenga.
Ukuze wenze ifayile yakho ye- iinzame zokuthengisa nge-imeyile zineziqhamo ngakumbiKubalulekile ukuba usebenzise obunye ubutyebi bokuqonda onokukufumana. Ukwenza uvavanyo lokwahlulahlula ukuze uqalise uvavanyo kunye nokuphuculwa kwezicwangciso zakho ezinokusebenza ngokukuko. Ukuba unengxaki yokwakha iphulo elifanelekileyo kwiimfuno zakho ezikhoyo zentengiso ke iindleko zokungaphumeleli ziya kucaciswa umgca wakho osezantsi.
Ngethamsanqa, zininzi iinkonzo eziphucukileyo ezikhoyo ukwenza inkqubo yokufumana ulwazi nge-imeyile ibe lula kakhulu. Iiplatforms ezifana MailChimp kwaye Qha ga mshelwano banobuchule ngokukodwa ekuboniseni iimethrikhi abanokwakhela kuzo abathengisi - njengamaxabiso avulekileyo e-imeyile, amaxabiso onqakrazo kunye nokuqonda okwahlukeneyo ngokuziphatha kwabamkeli bamaphulo akho. Olu lwazi lunokukunceda ukuba uchonge imiba kumaphulo akho ngokukhawuleza ngaphandle kokuthatha amaqhekeza abalulekileyo kuhlahlo lwabiwo-mali lwakho lwentengiso.
Umthombo wesithombe: Ingcebiso ngeSoftware
Nangona ukuseta ngamaqonga e-imeyile e-analytics kunokuthatha isuntswana kuhlahlo-lwabiwo mali, ubutyebi bokuqonda okunokukuxela kuluhlu lweemetrikhi kuya kwenza ukuba imikhankaso yakho yenziwe ngcono kubaphulaphuli abafanelekileyo ukuya phambili.
Amandla okuKhangelwa kokuSebenza
Ngokuqinisekileyo esona sixhobo sibalulekileyo kubarhwebi ekufuneka besenzile siyaziwa ngokuba 'ngaphaya kokulandela umkhondo,' inkqubo ehlalutya indlela abasebenzisi abayithathayo bakube befike kwiwebhusayithi yakho kwikhonkco le-imeyile elifakelweyo.
Kugqithise ngaphaya kokulandela umkhondo apho unokujonga inkqubela phambili yabasebenzisi kumaphepha afanelekileyo okwakha ayenzelwe ukwamkela ii-imeyile.
Ukuba ishishini lakho lizimisele ukulandelela umgangatho wamaphulo alo, kubalulekile ukwenza uphando olwaneleyo ngaphambi kokukhetha inkonzo ye-imeyile. Oku kunceda ukuba ujonge inqanaba elingaphaya kokulandela umkhondo abanikezela ngawo. Ngokucacileyo, izinto ezinje ngokulandela umkhondo wabatyeleli bewebhusayithi, amanqaku okuguqula, kunye nokumakishwa okuzenzekelayo kwemikhankaso ye-imeyile kubalulekile ekunikezeleni abathengisi ngeyona asethi ibalaseleyo ukuguqula ukusebenza.
Amanye amaqonga afanelekileyo amashishini okulandela umkhondo wokufika kwabo bethrafikhi kunye nemithombo yokuguqula inokufumaneka kwizinto azithandayo google Analytics kwaye UFinteza - Zombini ezijolise kakhulu kutrafikhi kunye Ukulandela umkhondo we-UTM.
Umthombo wesithombe: UFinteza
Indima yokuHlola ngaphakathi kweNtengiso ye-imeyile
Zimbalwa izibonelelo ezisebenzayo zokulandelela ukugcwala kwe-imeyile kuneGoogle Analytics. Iqonga liyakwazi ukugcina iliso kwintengiso yakho ye-imeyile ukuseka amacandelo ahamba phambili ngokwesiko ezinokuthi zilandele ngokuthe ngqo iindwendwe ezivela kumakhonkco e-imeyile ukulandelela ngokuchanekileyo indlela abaphulaphuli abathile abaziphatha ngayo.
Apha sinokubona ideshibhodi yokujonga ngokubanzi ngaphakathi kuGoogle Analytics. Ukwenza icandelo lemikhankaso yokuthengisa nge-imeyile ngaphakathi kweqonga, kuyakufuneka ukhethe ifayile ye Abaphulaphuli ukhetho kwideshibhodi. Uya kwandula unikwe ukhetho lokwenza abaphulaphuli abatsha ngelixa ukhetha ukulandelela ukufika kwe-imeyile.
Uyakwazi ukongeza iimeko ezithile kumacandelo owenzileyo, kwaye isishwankathelo siza kubonelela ngepesenti yobungakanani beendwendwe zakho oza kujongana nazo yimida oyimisileyo.
Ukwenza iikhowudi kunye nokuThengisa iiKhonkco ze-imeyile
Inxalenye ebalulekileyo yentengiso ye-imeyile iza ngohlobo lokudala iinkqubo zokulandela umkhondo ukukunceda ubone ukuba ngawaphi amaphulo aqhuba ngcono kunabanye.
Ukulandelela ngokufanelekileyo imikhankaso yakho ye-imeyile, amakhonkco afakelwe ngaphakathi kwii-imeyile zakho kufuneka aqondise abasebenzisi kumaphepha okufika afakwe iiparameter zokulandela umkhondo. Ngokwesiqhelo iiparameter ezinjalo ziya kubandakanya uthotho 'lwexabiso-lamagama' elifanelekileyo ukuze kube lula ukuzazisa. Baye bathambekele ekubhekiseni nakwesiphi na isicatshulwa esilandelayo '?' ngaphakathi kwe-URL yewebhusayithi.
Imvelaphi yomfanekiso: IHallam kwi-Intanethi
Ngasentla, sinokubona uthotho lwemizekelo ebhekisa kwindlela ukumakisha kunokusebenza ngokunxulumene needilesi ze-URL ezahlukeneyo. Kwimeko apho ubuzibuza malunga nexesha apho utm ibonakala kwimizekelo engentla, sisifinyezo se Imodyuli yokuKhangela kwi-Urchin.
Ukuba wamkele uGoogle Analytics njengeqonga lakho lokukhetha ukubeka iliso kwimizamo yemikhankaso ye-imeyile, qiniseka ukuba uyaziqhelanisa Martech ZoneUmakhi wePhulo likaGoogle loHlaziyo eyenza abathengisi ukuba bongeze iiparameter zamaphepha athile ahanjiswe kwiinkqubo ezahlukeneyo ze-imeyile.
Ukuba ujonge ukwakha incwadana ethunyelwa ngeveki okanye ngenyanga, kufanelekile ukuba ubhale iskripthi esakha iphepha le-HTML elinamakhonkco anomaki afakwe ngokulula ukuze kube lula ukubhekisa kuwo. Uninzi lwababoneleli ngeenkonzo ze-imeyile (ESPukubonelela ngomkhondo odityanisiweyo we-UTM onokuthi usebenze kunye nokuzenzekelayo ngokunjalo.
Ukuqonda indlela yokuziphatha kwabaThengi
Khumbula ukuba kuhlala kuluncedo ukuqhuba uphando kuthotho lweempawu ezinikezelwa sisoftware yokulandela umkhondo ngaphambi kokuthatha ungene kunye nokuthenga kwiqonga leshishini lakho. Ekugqibeleni, ukuthenga kwinto engahambelani ngokupheleleyo neemfuno zakho kunokukhokelela kwilahleko yezemali engenakuthintelwa.
Endaweni yokujonga nje kwiirhafu ezivulekileyo ze-imeyile kwaye ucofe iimetrikhi, abathengisi kufuneka babeke iliso ngokupheleleyo kuguquko lwabo, olunokuba luncedo ekuqondeni i-ROI yokwenyani enxulunyaniswe neendlela ezithile zokuthengisa nge-imeyile.
Ngelixa ngokuqinisekileyo zininzi iinkcukacha ezisisiseko phaya ezinceda amashishini ukuba ajonge ukuba bangaphi ababhalisile abakhathazayo ngokufunda ii-imeyile abazithunyelweyo, kwaye ngabaphi abafumanayo abakhetha ukutyelela iwebhusayithi emva kokuba i-imeyile ingene kwi-inbox, uninzi lwezi metriki. ayinakho ukubonelela ngobutyebi bedatha ekufuneka abathengisi bachaze ngokupheleleyo ukuba abasebenzisi basabela njani kwimikhankaso abayibonayo ngaphandle kokuba indlela abaziphatha ngayo kwindawo leyo ziyafumaneka ukuba zifundwe.
Ukucacisa ngoku, cofa-kwinqanaba-lingabonisa ukuba umamkeli ukulungele ukuvula i-imeyile evela kwinkampani yakho. Kodwa nokuba ikhonkco liyenziwa kuninzi lwamatyala, akusoloko kuthetha ukuba kuya kukhokelela kuguquko oluninzi. Ngapha koko, likho nethuba lokuba ukucofa okuninzi kwenzeka kumzamo obanzi wababhalisele ungabhalisi kuluhlu lokuposa.
Ukufunda ngakumbi malunga nokuziphatha kwababhalisi kubalulekile ekufumaneni umfanekiso opheleleyo wendlela elineziqhamo ngayo iphulo lakho.
Umthombo wesithombe: I-Monitor Monitor
Ukujonga iphulo kuye kwaliphayona izinga lokucofa ukuvula (CTOR), ekhanyisa ngakumbi ulwazi olunokufumana ishishini ekwenzeni amaphulo alo.
Ukuthengisa nge-imeyile kunye nomxholo zihamba ngokusezandleni, kwaye kuhlala kufanele ukuba kwenziwe umsebenzi omninzi phakathi kokubonisa umthengi ukubonakalisa ukuzimisela kokufunda ii-imeyile zakho kwaye emva koko enze ukuthenga. Umxholo uyanceda ukwakha ubudlelwane phakathi kwamashishini kunye nabathengi, kwaye kubalulekile ukuba abathengisi bangalahli umbono wabo ukongeza ixabiso phakathi kweemetrikhi ezichaza ezona ndlela zisebenzayo ezantsi kwefaneli yokuthengisa.
Ihlabathi lentengiso liye lakhuphisana ngakumbi kwaye laqhubela phambili kwezobuchwephesha kunangaphambili. Phakathi kokutsha, ukuqonda okungaphakathi, intengiso ye-imeyile endala iye yahlala ingamandla angenakushukunyiswa kuyo yonke indawo. Ngomdibaniso olungileyo wophando, utyalomali, kunye nokwenza ulwazi, abathengisi abaninzi banamandla okonga imali ngelixa bekhulisa amandla abo okuphumelela. Ekuphela kwento ekufuneka bayenzile kukwazi ukuphononongwa kwemiyalezo abayinikwayo ziifunele zabo zentengiso.
tags: I-Monitor Monitoriphulo urlizinga lokucofaizinga lokucofa-ukuvulaukuguqulwa kokusebenzaCTTabaphulaphuli be-imeyileumxholo wephulo le-imeyileigama lomkhankaso we-imeyileUmthombo wephulo le-imeyileixesha lomkhankaso we-imeyileimeyile nqakraza-ngokusebenzisa izingaizinga lokuguqulwa kwe-imeyileukuguqulwa kwe-imeyileimeyile ctri-imeyile yokuthengisa abaphulaphuliimbuyekezo yentengiso ye-imeyile kutyalo-maliukuthengisa nge-imeyile i-roii-imeyile evulekileyoimeyile roiulwahlulo lwe-imeyileamakhonkco okulandela i-imeyileizinga lokungabhalisi nge-imeyilefintezaIdeshibhodi kaGoogle yokuhlaziyaUmakhi wePhulo lika-Uhlalutyo lukaGooglehostgatorindlela yokwenza ikhowudi ye-imeyileukulandelela njani ukuguqulwa kwe-imeyileindlela yokulandela umkhondo wentengiso ye-imeyilemailchimpizinga elivulekileyobuyela kutyalo malisemrushIingcebiso zesoftwareukulandelela ukuguqulwa kwe-imeyileImodyuli yokulandela umkhondo we-urchinumbuzo we-utmUtm umkhangeliUkulandela umkhondo we-utmumkhankaso we-utm_utm_omxholoutm_phakathiutm_umthomboutm_term
Jun 10, 2021 ngo-4:36 AM
Ukulandela umkhondo kunye nokuvavanya ukusebenza kwentengiso yakho ye-imeyile yeyona ndlela yokwazi abaphulaphuli, ukwakha phezu koko kusebenzayo, susa into engasebenziyo, kwaye wenze iqhinga libe lelona lingcono. Ndiyayithanda indlela obonelela ngayo ngolwazi kweli nqaku, abaphulaphuli abaza kuza kwaye bafunde oku baya kufumana inzuzo koku, ndiqinisekile.